Olee otu Insurtech Startup Lami bu ndi ochichi ndi ochichi nke ndi ochichi na Afrika
Olee otu Insurtech Startup Lami bu Democratizing Insurance in Africa
Afrika di ka ndi nwere nnukwu ulo oru mkpuchi mkpuchi zuru oke na uwa nile ma naani ya tinye ya dika nkeji nke abuo na-eto eto nke mkpuchi na Latin America na-aga n'ihu.
Tupu COVID-19 etiwapụta, a na-atụ anya na ahịa mkpuchi nke Africa toro na ọnụego kwa afọ n'etiti 2020 na 2025 na 7 pasent kwa afọ.
Agbanyeghị, ọbịbịa nke ọrịa a apụtawo na o belatara mkpuchi nke mkpuchi gburugburu kọntinenti ahụ maka ndị bi na ya.
Yabụ, iwetara ndị mmadụ mkpuchi mgbe ị na-ebuputa teknụzụ bụ ụzọ dị irè iji hụ na ịbanye na kọntinent ahụ.
Otu ikpo okwu achọpụtala mkpa a bụ Lami Technologies an insurtech mmalite dabere na Kenya
Site n'aka Jihan Abass n'etiti 2018 nwere echiche nke imebi ihe mgbochi 3% mkpuchi ịbanye n'Africa, onye nchoputa sitere n'ike mmụọ nsọ nke inye nchekwa maka ụwa na-emepe emepe, ọkachasị na kọntinent Africa.
Jihan Abass, onye isi na onye guzobere, Teknụzụ Lami
Mgbe ọ na-etolite na Kenya, ịhụ ka ezinụlọ na-alụ ọgụ n'ihi ọrịa na ihe ọghọm na-atụghị anya ya, ma ọ bụ n'ihi ọdachi ndị na-emere onwe ha na-akpata oke mbibi bụ ihe a na-ahụkarị na Kenya.
Mgbe Jihan matara na enweghị nchekwa nke kọntinenti maka nde mmadụ, Jihan bidoro njem ya nke mkpuchi ọchịchị onye kwuo uche ya.
O chikọtara otu ndi di iche-iche nwere otutu iri-abuo nke nkpuru aru na mkpuchi, teknụzụ na ndi oru itumgbere ahia na ebumnuche nke mkpuchi ochichi onye kwuo uche site na ntinye aka na teknụzụ. Nke ahụ bụ otú e si mụọ Teknụzụ Lami.
“Anyị na-agbanwe mkpuchi mkpuchi site n’inye ndị ahịa ohere ị nweta ngwaahịa na-arụrụ ha ọrụ na ndụ ha kwa ụbọchị.
Nkà na ụzụ anyị na-enyere aka belata ọnụahịa nkesa mkpuchi ma belata ụgwọ ọrụ, ebe ọ na-erute ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị Africa. ”
Nchịkọta nyocha nke mkpuchi na Africa
N'akuku Afrika dum, ugwo mkpuchi mkpuchi di oke ala, na-eme ka otutu ndi mmadu nwee nsogbu ego n'ihi nsogbu mberede.
Dịka ọmụmaatụ, n'ofe Africa, ntinye nke mkpuchi bụ ihe na-erughị 3% na otu n'ime ihe kpatara obere ịbanye n'ime ya bụ na ngwaahịa na onyinye dị ugbu a adịghị adaba maka mkpa ndị ahịa na ndị ọrụ anaghị erite uru dị ukwuu n'aka ha.
“Ngwaahịa mkpuchi ọdịnala enweghị mgbanwe, anaghị adị ọnụ ma anaghị enweta ya. Insurance nwere ike ịchụkwudo ego ndị ọzọ na - agbanwe ego na enweghị atụ. ”
N'ihe banyere mmuta ego na mmuta banyere mkpuchi ka bu ihe ima aka n'Africa.
“Ọtụtụ ndị mmadụ enwetụbeghị mkpuchi na mkpuchi. N'ihi ya, ọ dị mkpa na ọrụ inshọransị, ma ọ bụ nke dijitalụ ma ọ bụ nke ọdịnala, na-akwado mbọ a na-agba maka ịkụziri ndị mmadụ ihe. ”
Dabere na onye guzobere ya, ebumnuche Lami bụ iru 50 nde ndị ahịa site na 2025 site na Lami API ma dezie ihe karịrị $ 1 ​​ijeri na GWP.
Ndị otu Lami
"Lami ga-ekere oke oke n'inweta onodu nchekwa nye ndi bi n'Afrika site na iji teknụzụ iji nyefee ihe mkpuchi mkpuchi mgbanwe n'ebe obula na onye obula."
Otu Lami si aru oru
Inweta nnyocha otu Lami si arụ ọrụ ebe a bụ usoro a na-eme site n'usoro usoro insurtech na-arụ ọrụ ya.
Lami na ndị mmekọ azụmaahịa na-arụ ọrụ iji mepụta ngwaahịa mkpuchi nke na-egbo mkpa ha ma ọ bụ nke ndị ahịa ya.
Onye ọchụnta ego na-enye iwu amụma mkpuchi dijitalụ, site na ntanetị weebụ ma ọ bụ API.
Ndị ahịa na-ekerịta nkọwa nkọwa na ngwa na ezigbo oge yana ndị na-ede akwụkwọ ma nweta mmezi na oge ndekọ.
Ndị mmekọ nwere ike nyochaa ma jikwaa ọrụ mkpuchi dijitalụ site na dashboards raara onwe ya nye.
Lami na ndị mmekọ na-emekọ ihe iji hụ na ihe ịga nke ọma n'akụkụ niile nke ọrụ ahụ.
Dabere na weebụsaịtị ya, API nke Lami na-enye ndị ọrụ ohere ịbanye na gburugburu nchekwa mkpuchi site na:
Real oge underwriting
Ntinye ederede na-edeghị akwụkwọ na-eme ka ndị ahịa nweta ya.
Nnukwu data na physics
Nnukwu data na-ere ma na-ere ere.
Ọnụ ego dị omimi
Ọnụahịa dị iche iche dabere na profaịlụ na omume ndị ahịa.
Netwọk na-eweta ọrụ
Ndị na-enye ọrụ na-arụkọ ọrụ ọnụ na-enye ahụmịhe ahịa na-enweghị atụ.
Ọgụgụ isi na-ekwu nhazi
AI nyere ikikere iji mee ka oge nhazi ngwa ngwa ma chọpụta wayo.
Regwọ ọrụ na iguzosi ike n'ihe
Usoro ụgwọ ọrụ nke onwe na-eme ka aka na iguzosi ike n'ihe dịkwuo elu.
Na ihe Lami na-eme n'ụzọ dị iche, Youssef kwuru na mbido insurtech na-enyere ndị mmekọ aka ịhazi ọrụ ịnshọransị ha na-aga.
Lami na-enye ndị ọrụ ihe mkpuchi mkpuchi njedebe dijitalụ na gburugburu ebe obibi nke na-enyere ụlọ ọrụ gafee mpaghara aka ịnyefe na jikwaa ngwaahịa mkpuchi ndị ọrụ ha, site na ahụmịhe dijitalụ na-enweghị ntụpọ.
Igwe okwu Lami na-enye ọrụ mkpuchi dị iche iche site na API na-enye ndị na-ede akwụkwọ n'okpuru ohere ka ha jikọọ na ụlọ ọrụ ndị na-eche ihu iji nye mkpuchi mkpuchi dị ka uru bara uru maka ndị ahịa dị ugbu a, ọtụtụ n'ime ha enweghị nchekwa.
“Ihe ngwanrọ anyị API na-enyere gị aka imepụta ihe ederede, belata oke ịza, nwekwuo uru.”
Culturegba ume mkpuchi mkpuchi mkpuchi ume n’Africa
“Site n'inye ha ngwaahịa ndị na-edozi nsogbu n'ezie ma nwee nkwenye bara uru.”
Onye guzobere ya kwuru na nke a bụ nnabata nsonaazụ nyocha na njikwa na-aga n'ihu nke na-ekpughe mkpa ma na-achọpụta ohere ịkọwapụta ụdị ngwaahịa na mmepe.
“Site n’inwe ntụkwasị obi n’ebe ndị ahịa nọ, ọkachasị site na imezu nkwa ahụ bụ isi ihe dị mkpa iji nabata ngwa ahịa mkpuchi.”
N'ịkọwa n'ihu ọ sịrị na amụma mkpuchi bụ naanị nkwa ma ọ bụrụ na emezughị ya, mgbe ahụ ntụkwasị obi agbajila, nke a ga-emetụta ngwaahịa nnabata.
"Ọ bụrụ na ndị ahịa 'atụmanya na-zutere bụrụ na nke a na-azọrọ, mgbe ahụ, a ga-ike a nti ahụmahụ na ga sikwuo ya aha na doo nke ngwaahịa."
Site n'ịkụziri ndị ahịa uru nke ịhazi ego na iwelata ihe egwu. Insurance bụ ngwaahịa dị mgbagwoju anya nke anaghị eji ebe niile, yabụ enwechaghị nghọta banyere mkpuchi.
Ndị na-enyerịrị ego mkpuchi kwesiri iwepụta oge na mbọ dị ukwuu iji kụziere ndị ahịa banyere uru ha ga-atụ anya site na ịzụta iwu.
N'agbanyeghị afọ 2020 bụ afọ jupụtara n'ọrịa, ọ egbochighị mmalite insurtech ị ga-ebuli elu ụfọdụ.
Na mbido 2020, Lami weputara ngwa ngwa mkpuchi moto dijitalụ nke mbụ na East Africa yana tupu mkpọchi n'ọnwa na-eso ya, mmalite bidoro ngwa mkpuchi moto dijitalụ ọzọ ewepụtara maka PSVs.
N'oge mkpọchi ahụ gburugburu Eprel, Lami kwadoro ahịa mkpuchi na JumiaPay App yana n'ọnwa na-esote ọ kwadoro mkpuchi ihe mbanye n'aka ekwentị mkpanaaka.
Na Julaị, otu n’ime ụlọ akụ kacha elu n’Ebe Ọwụwa Anyanwụ Africa nọ na mbido iji ikpo okwu ya ka ọ bụrụ mmachi mmachi. N’ọnwa Nọvemba n’otu afọ ahụ, Lami gbara mbọ hụ na ego kwadoro ya, ya na ngwaọrụ ọgwụ.
Ka ọ na-erule ngwụsị afọ ahụ, mmalite ahụ nyere ndị ọrụ aka ọrụ WorkPay mkpuchi mkpuchi ahụike na mba ahụ.
Featured Image: Jihan Abass, onye isi na onye guzobere Lami Teknụzụ
Kenya Sokowatch depụtara na Companylọ Ọrụ Na-ahụ Maka Inlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Worldwa Ọhụrụ 2021
Kedu otu Saada si enyere ndị ọchụnta ego aka rụọ ọrụ na Kenya
Ebumnuche nke anụ ahụ Kenya “Uncover Skincare” malitere “otu ụlọ ahịa nkwụsị”
Ebumnuche nke logistics nke Etiopia, Catch gbasaa na Kenya